Zyrtec vs Claritin: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो - औषधि बनाम मित्र | अगस्ट 2021
कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी चेकआउट कल्याण कम्पनी, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Zyrtec vs. Claritin: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो
Zyrtec vs. Claritin: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो
Zyrtec र Claritin एलर्जी औषधी हो कि सामान्यतया घाँस ज्वरो र माथिल्लो श्वसन पथ एलर्जी को लक्षणहरु को उपचार गर्न सिफारिस गरीन्छ। यी दुबै औषधीहरू एन्टीहिस्टामाइन्स हुन् जसले छींकने, बग्ने नाक, खुजली र आँखाबाट अस्थायी रूपमा राहत दिन्छ। एन्टिहिस्टामाइन्स शरीरमा हिस्टामाइन नामक रासायनिक उत्पादन घटाएर काम गर्दछ। हिस्टामाइन एक पदार्थ हो जुन लक्षणहरू पैदा गर्न जिम्मेवार हुन्छ जब शरीरले एलर्जीनको सम्पर्क पत्ता लगाउँदछ।
यी एलर्जी औषधीहरूलाई डाक्टरको औपचारिक प्रिस्क्रिप्शनको आवश्यकता पर्दैन। तपाईं आफ्नो स्थानीय फार्मेसीबाट एक over-the-काउन्टर औषधि को रूप मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दुबै Zyrtec र Claritin आफ्नो जेनेरिक फार्महरूमा उपलब्ध छन्। यद्यपि Zyrtec र Claritin दुबै समान औषधि वर्गको हो, तिनीहरूसँग सुरुको समय र उनीहरूको साइड-प्रोफाइल प्रोफाइलमा भिन्नताहरू छन्।
Zyrtec र Claritin बीच मुख्य भिन्नता के हो?
Zyrtec मा सक्रिय घटक cetirizine हाइड्रोक्लोराइड हो। वयस्क र6बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरूमा एलर्जीका लक्षणहरूको उपचार गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। यो सामान्यतया मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा लिईन्छ र एलर्जीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन वर्षभरि (बारहमासी) वा केही asonsतुहरूमा (मौसमी) रहन्छ। Zyrtec (Zyrtec विवरण) को साथ कार्यको द्रुत सुरुवात आमतौरि १ घण्टा भित्र महसुस हुन्छ। यद्यपि यो औषधीको कारण हुन सक्ने सम्भावना पनि छ बेहोरा ।
अर्कोतर्फ क्लेरटिनलाई लोर्याटाइनको सामान्य नामले चिनिन्छ। यो एलर्जी लक्षणहरूको उपचारको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ तर Zyrtec भन्दा action घण्टा भन्दा कार्यको सुस्त शुरुआत छ। यसले बेहोश हुन सक्ने सम्भावना कम छ र मौसमी वा बारहमासी एलर्जीको लागि लिन सकिन्छ। Claritin (Claritin विवरण) वयस्क र6बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुका लागि उपयुक्त छ। यो मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ।
Zyrtec र Claritin बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति जेनेरिक फार्म उपलब्ध छ जेनेरिक फार्म उपलब्ध छ
सामान्य नाम Cetirizine HCL Loratadine
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? १० मिलीग्राम मौखिक क्याप्सूल दैनिक एक पटक दैनिक १० मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? दिनमा वा खाना बिना, एक पटक। दिनमा वा खाना बिना, एक पटक।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? एलर्जीका लक्षणहरू समाधान भएपछि बन्द गर्नुहोस् एलर्जीका लक्षणहरू समाधान भएपछि बन्द गर्नुहोस्
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्क र २ बर्ष र माथिका बच्चाहरू
सर्तहरू Zyrtec र Claritin द्वारा उपचार
सबै एन्टीहिस्टामाइन्सलाई एलर्जीको उपचारमा प्रयोग गरिएको छ। ओटीसी एन्टीहिस्टामाइन्स जस्तो कि Zyrtec र Claritin एलर्जी राइनाइटिस (नाकको अनुहारको सूजन), एलर्जीक नेत्रश्लेष्मलाशोथ (आँखा वरिपरि सूजन), र पित्ती (छिटो) को उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जाइरटेक र क्लेरटिन नासिका प्रजननहरू जस्तै छींकने, बग्ने नाक र भीड जस्ता लक्षण नियन्त्रण गर्न प्लेसबो औषधिहरू भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएका छन्। दुबै औषधिहरूले पनि खुजली र पानी आँखाको उपचार गर्न सक्छ। Zyrtec र Claritin पनि एलर्जी देखि postnasal ड्रिप उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी दुई औषधि को प्रभाव लगभग २ hours घण्टा सम्म रहन्छ। दुबै औषधीहरू मौसमी वा बारहमासी एलर्जीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यी एन्टीहिस्टामाइन्स गैर-एलर्जीको अवस्थामा कम प्रभावकारी देखाइएको छ। तिनीहरूलाई सामान्यतया सामान्य चिसो वा ब्याक्टेरिया संक्रमणको लक्षणहरूको उपचारको लागि सिफारिश गरिदैन। दुबै औषधिहरू दमको उपचार गर्न अफ-लेबल प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन एलर्जीद्वारा ट्रिगर गरिएको हो। यद्यपि अन्य लागूपदार्थ यी केसहरूमा अधिक उपयोगी हुन सक्छ।
सर्त Zyrtec क्लेरटिन
बारहमासी एलर्जी राइनाइटिस हो हो
दीर्घकालीन छाला हो हो
एलर्जी दम अफ-लेबल अफ-लेबल
Zyrtec वा Claritin अधिक प्रभावी छ?
क्लिनिकल परीक्षणहरूले देखाए कि Zyrtec र Claritin दुबै एकको तुलनामा एलर्जीको लक्षणहरूलाई कम गर्न बढी प्रभावकारी छन्। प्लेसबो गोली । यद्यपि त्यहाँ केहि अध्ययनहरू छन् जुन क्लेरटिन र जीरटेक बिचको प्रभावकारिताको तुलना गर्छन्।
Zyrtec क्लेरटिनको तुलनामा कार्यको छिटो शुरुआत छ र एक क्लिनिकल परीक्षण अनुसार एलर्जीको लक्षणहरू कम गर्न क्लेरेटिन भन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। जहाँसम्म, Zyrtec को सक्रिय घटक cetirizine, लोराटाडाइन भन्दा अधिक तन्दुरुण उत्पादन देखाईएको छ। अनियमित, क्लिनिकलमा परीक्षण , एलर्जिक राइनाइटिसको लागि सेन्ट्रिजाइन लिनेहरूले लोराटाडाइनको तुलनामा वर्कडेका दिनमा बढी सजिलै महसुस गरे।
एंटी-एलर्जी औषधि को छनोट अन्ततः तपाइँको विशिष्ट अवस्था र लक्षणहरु मा निर्भर गर्दछ। तपाईका डाक्टरले तपाईका लक्षणहरूको मूल्या after्कन गरेपछि तपाईलाई उत्तम औषधि सुझाव दिन सक्षम हुनेछन्।
Zyrtec vs Claritin को कभरेज र लागत तुलना
Zyrtec सामान्य औषधीको रूपमा उपलब्ध छ। किनकि यसलाई डाक्टरको भ्रमण वा प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक पर्दैन, यो ओभर-द-काउन्टर (OTC) खरीद गर्न सकिन्छ। यस कारणका लागि, यो मेडिकेयर वा बीमा योजनाहरू द्वारा कभर गरिएको छैन। जेनेरिक Zyrtec को औसत खुद्रा लागत around 25 को आसपास छ। एकलकेयर कूपन कार्डको साथ, यो मूल्य काफी कम गर्न सकिन्छ।
सिंगलकेयर प्रिस्क्रिप्शन कुपन कार्ड पाउनुहोस्
क्लेरटिन एक पटकको एन्टीहिस्टामाइनको रूपमा लिइएको छ जुन जेनेरिक ओटीसी औषधिको रूपमा खरीद गर्न सकिन्छ। यो मेडिकेयर वा बीमा योजनाहरू द्वारा प्रायः ढाक्दैन। सामान्य क्लेरटिन ट्याबलेटको लागि औसत नगद मूल्य around 30 को आसपास छ। यो मूल्य एकलकेयर कूपन कार्डको साथ घटाउन सकिन्छ र तपाईं जानु भएको फार्मेसीमा निर्भर रहँदा तपाईं $4भन्दा कम तिर्न सक्नुहुन्छ।
मानक खुराक १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे । २ $ 18- $ 446
एकलकेयर लागत + १ + + $ 4- $ 11
Zyrtec र Claritin को सामान्य साइड इफेक्टहरू
Zyrtec र Claritin जस्ता दोस्रो पुस्ताको एन्टीहिस्टामाइन्सले बेहोर्ने साइड इफेक्टको सम्भावना कम हुन्छ; जे होस्, दुई मध्ये, Zyrtec तन्द्रा को एक उच्च घटना को कारण गरीएको छ।
जाइरटेकका अन्य प्रतिकूल प्रभावहरूमा थकान, सुस्ती, चक्कर आउने, सुख्खा मुख, टाउको दुख्ने, कब्ज, खोकी र मतली समावेश छ।
क्लेरटिनको सामान्य साइड इफेक्टमा टाउको दुख्ने, थकान, सुख्खा मुख, पेट दुखाइ, घबराहट, पखाला, छाला दाग, नाक रगत, र धमिलो दृष्टि समावेश छ।
अन्य गम्भीर दुष्प्रभावहरूमा असामान्य मुटुको दर, धडधड, गम्भिर बेहोशी, वा दौरा पर्न सक्छ। तपाईको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नु र तपाईले यी कुनै पनि गम्भीर दुष्प्रभावहरूको अनुभव गर्नुपर्दा तुरून्त हेरचाह गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
तन्द्रा हो <17% हो <5%
टाउको दुखाई हो * रिपोर्ट गरिएको छैन हो * रिपोर्ट गरिएको छैन
सुस्ती हो * हो *
दुखेको घाँटी हो * हो *
कफ हो * हो *
मुहान: डेलीमेड ( Zyrtec ), डेलीमेड ( क्लेरटिन)
Zyrtec बनाम Claritin को ड्रग अन्तर्क्रिया
प्राय एन्टिहिस्टामाइन्स, Zyrtec र Claritin सहित, कलेजो द्वारा metabolized र मिर्गौला मा उत्सर्जित हुन्छ। यी औषधिहरू कलेजोको P450 साइटोक्रोम एन्जाइमले बिच्छेद गर्दछ जुन अन्य औषधीहरूको संख्यामा मेटाबोलिजममा संलग्न छ। यस कारणका लागि, दुबै क्लेरटिन र Zyrtec मा ड्रग अन्तरक्रियाको एक संख्या छ।
Zyrtec र Claritin Benadryl (diphenhydramine) जस्ता अर्को sedating antihistamine को साथ टाढा रहनु पर्छ। यी दुई औषधिहरू सँगै लिँदा सीएनएस साइड इफेक्टहरू बढाउन सक्छ जस्तै बेहोरा र खराब, न्याय, एकाग्रता, र मेमोरीमा कमजोरी। तपाईंले Zyrtec वा Claritin रक्सीको सेवनबाट पनि जोगिनु पर्छ जसले निन्द्रा पनि बढाउन सक्दछ।
Zyrtec ले कुराकानी गर्न सक्ने अन्य बेहोर्ने औषधीहरूले बन्जोडियाजेपाइनहरू, केही एन्टिकोनभल्सेन्ट्स, मांसपेशी रिलैक्सन्टहरू, र अन्य औषधिहरूको बीचमा केहि एन्टीडिप्रेससन्टहरू समावेश गर्दछ।
Zyrtec को तुलनामा क्लेरटिनसँग कम ड्रग अन्तरक्रिया हुन सक्छ।
रक्त परीक्षणमा हेमेटोक्रिटको अर्थ के हो
औषधि ड्रग क्लास Zyrtec क्लेरटिन
क्लोरफेनिरामाइन पहिलो पुस्ता एन्टीहिस्टामाइन हो हो
गाबापेन्टिन एन्टिकोनवल्सेन्ट हो हैन
Duloxetine Antidepressants हो हैन
साइक्लोबेन्जाप्रिन मांसपेशी आराम हो हैन
लोराजेपाम बेन्जोडियाजेपाइन हो हैन
हाइड्रोकोडोन ओपिओइड हो हैन
Zyrtec बनाम Claritin को चेतावनी
एन्टिहिस्टामाइन्स लिनु हुँदैन यदि औषधीमा कुनै पनि सामग्रीमा एलर्जी प्रतिक्रियाको इतिहास छ। या त Zyrtec वा Claritin लिनु अघि, यदि तपाइँले कलेजो वा मृगौला रोग छ भने आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ। किनभने यो औषधिहरू मिर्गौलामा प्रशोधित हुन्छन् र उत्सर्जित हुन्छन्।
6 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू, र adults 65 बर्ष भन्दा माथि उमेरका, Zyrtec वा Claritin लिनु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु पर्छ।
थप रूपमा, Zyrtec रक्सी, ट्रान्क्विलाइजर वा अन्य प्रकारको शामक औषधीको एक साथ प्रयोगको साथ contraindated छ किनकि यसले यस औषधिको उत्कट साइड इफेक्टहरू बढाउन सक्छ।
अध्ययन देखाईएको छ धेरैजसो एन्टिस्टामाइन्सले गर्भावस्थामा लिँदा जन्म दोषहरू पैदा गर्दैन। यद्यपि यी औषधिहरू केहि निश्चित जन्म दोष पैदा गर्ने क्षमता छ। गर्भावस्थामा Zyrtec वा Claritin लिनु अघि, तपाईले आफ्नो डाक्टरसँग सम्भावित जोखिमहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दछ।
स्तनपानको समयमा एन्टीहिस्टामाइन्स लिने सिफारिस हुन सक्दैन किनकि यी औषधीहरू आमाको दुधबाट बच्चामा जान सक्दछन्। Zyrtec र Claritin महिलाहरु जो स्तनपान गरिरहेका छन् को लागी विचार गर्न सकिन्छ यदि लाभहरु जोखिम भन्दा बढी छ।
Zyrtec बनाम Claritin को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
जाइरटेक एक ओभर-द-काउन्टर एन्टीहिस्टामाइन हो जुन एलर्जीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले एक घण्टा भित्र नै एलर्जीको लक्षणहरूलाई कम गर्न थाल्छ र २ 24 घण्टासम्म रहन्छ। Zyrtec वयस्क र6बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
क्लेरटिन दोस्रो पिढीको एन्टीहिस्टामाइन हो जुन काउन्टरमा उपलब्ध छ। यो एलर्जी को उपचार मा संकेत गरीन्छ र करीव hours घण्टा मा अधिकतम प्रभाव उत्पादन गर्दछ। एलर्जी राहत सामान्यतया २ 24 घण्टासम्म रहन्छ। Claritin वयस्क र २ बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुका लागि उपयुक्त छ।
के Zyrtec र Claritin उस्तै हो?
Zyrtec र Claritin दुबै समान औषधि वर्गका हुन् तर तिनीहरूको जेनेरिक फार्महरू फरक छन्। Zyrtec सक्रिय कंपाउंड cetirizine हाइड्रोक्लोराइड छ जबकि Claritin सक्रिय कम्पाउन्ड loratadine छ। Zyrtecसँग क्लेरटिनको तुलनामा धेरै चल्ती गुणहरू छन्।
Zyrtec वा Claritin राम्रो छ?
Zyrtec र Claritin को प्रभावकारिता तुलना गरी केहि अध्ययनहरु गरिएको छ। एउटा क्लिनिकल परीक्षण Zyrtec एलर्जी राइनाइटिस को लागी राम्रो हुन सक्छ भनेर देखाईएको छ जबकि दुई बीच कुनै महत्वपूर्ण भिन्नताहरु थिए। अझै, Zyrtec क्लेरटिनको तुलनामा अधिक तन्द्रा र somnosion उत्पादन गर्दछ।
के म गर्भवती हुँदा Zyrtec वा Claritin प्रयोग गर्न सक्छु?
केहि एन्टिहिस्टामाइन्स जन्म दोषसँग सम्बन्धित रहेको देखाइएको छ। जबकि Zyrtec र Claritin कम गर्भावस्थाको जोखिम हुन सक्छ, यी औषधिहरू सुरू गर्न भन्दा पहिले आफ्ना डाक्टरसँग सल्लाह गर्नु राम्रो हो।
के म Zyrtec वा Claritin रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
होईन। Zyrtec वा Claritin रक्सीको साथ सेवन गर्नु हुँदैन। एन्टीहिस्टामाइन्सको साथ खपत गर्दा रक्सीले बेहोर्ने साइड इफेक्टहरू बढाउन सक्छ।
के तपाईं Zyrtec र Claritin एकै साथ लिन सक्नुहुन्छ?
होइन। एन्टिहिस्टामाइन्स एकै साथ लिनु हुँदैन किनभने यसले प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ।
के Zyrtec वा Claritin सबै वर्ष दौर दैनिक लिनको लागि सुरक्षित छ?
Zyrtec र Claritin दीर्घकालीन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि यी औषधीहरू सामान्यतया एलर्जीको मौसममा निर्धारित गरिन्छ। एक पटक एलर्जी लक्षणहरू कम भएपछि, यी औषधीहरू बन्द गर्न सकिन्छ।
कुनचाहिँ राम्रो छ – लराटाडाइन वा सेर्टिजाइन?
लोराटाडाइनसँग सेटीरिजाइनको तुलनामा थोरै सेडेटिंग गुणहरू छन्। दुईको प्रभावकारिता बढी वा कम बराबर छ। जे होस्, cetirizine मा चाँडो कार्यको सुरुवात हुन सक्छ।
के एलर्जी औषधि कुकुरहरु को लागी सुरक्षित छ
कति 5mg melatonin लिनु पर्छ
मेडिकल बीमामा जेबबाट के मतलब हुन्छ
ड्रग सिंगुलायर के को लागी प्रयोग गरीन्छ
कुन ड्रग्सले ड्रग स्क्रिनमा गलत सकारात्मक हुन सक्छ?